Khiqiza ngamandla amagama angukhiye wezikhangiso | Martech Zone
Khiqiza ngamandla amagama angukhiye wezikhangiso
NgeSonto, Septhemba 23, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngenkathi ufunda Isiza sikaJohn Chow, Ngangikhohliwe ukuthi ngibhalisele i-AuctionAds kepha angikaze ngiyibeke ikhodi kusayithi lami. Namuhla ebusuku ngingeze ikhodi kokuthunyelwe kwami ​​okukodwa phakathi kokuqukethwe kokuthunyelwe nesigaba sokuphawula. Ngibheke phambili ekuboneni ukuthi benza kanjani.
I-AuctionAds inesici esihle lapho ungacacisa khona amagama asemqoka ongathanda ukukhiqiza ngawo izikhangiso. Esikhundleni sokuthola okujwayelekile kusayithi lami lonke, ngibeke i- I-plugin ye-Ultimate Tag Warrior ukusebenzisa (futhi)!
I-AuctionAds idinga ukuthi ufomethe amagama akho angukhiye wesikhangiso anama-semi-colon njenge-delimiter. Ngenxa yalokho, udinga ukufometha ngokwezifiso ikhodi ekhishwe yi-Ultimate Tag Warrior. Ngifomathe okwami ​​ukufaka umaki wokuqala bese ngifaka i-semi-colon nendawo phakathi kokunye. Ngaphezu kwalokho, ngichaze ubuningi bamagama angukhiye angama-3 okufanele akhonjiswe futhi ngawalandela ngamagama asemqoka angama-3 engaziyo ukuthi azohlala ekhombisa isikhangiso.
Ukuqondisa isikhangiso kokuqukethwe kufanele kuholele ekukhuphukeni kwamanani wokuchofoza esikhangisweni. Muva nje ngivivinye iGoogle Adsense vs. Ukudluliselwa kweGoogle kwenye yesayithi lami eliqondisiwe kanti i-Adsense ibe nezikhathi eziphindwe kasishiyagalombili isilinganiso sokuchofoza. Ukubaluleka kokukhangisa kuyikho konke! Uma unganikezeli ngezikhangiso ezifanele, uzocasula abafundi bakho noma bazokhula bangazinaki izikhangiso. Akekho ofuna lokho!
Inothi elilodwa: Lapho uvivinya ikhodi empeleni, ungahle ungabuyisi noma yimuphi umphumela ekuqaleni. Abantu bezikhangiso ze-Auction bathi kuthatha isikhathi ukwakha leyo miphumela yamagama asemqoka. Angiqiniseki ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani. Usengathola imali yokudluliselwa ku-interface ye-Auction Ads, noma kunjalo!
Tags: izikhangiso zendali
Sawubona Mike! Ukumaketha Kubuye Kumayelane Nokwakheka